Madadaalo | Radio Himilo
Home / Madadaalo
Himilo – Dadka ku nool jiinka wabiga Mekong ee dalka Cambodia ayaa soo dabay kalluun seynisyahannadu ku tilmaameen midkii ugu waynaa ee ebed laga dhex helo biyaha macaan, kaasi oo xogtiisa la keydiyo. Waxaa culeyskiisa uu gaarayaa 661 pound oo ...
Ahmed Haaddi May 3, 2022
Ahmed Haaddi March 15, 2022
Himilo – Shimbir baqbaqaaq Afrikaan ah oo lagu magacaabo Echo ayaa dunida tusay in shimbiruhu ay sidoo kale noqon karaan rinjiyeyaal jooga Beerta Xayawaanka ee Maryland. Kooxda daryeelka safaaradda ee beerta xayawaanka ayaa tababaraya Echo isla markaana baraya sida wax ...
La kulan – Ninka teleefannada u dhaqda sida xoolaha
Ahmed Haaddi March 14, 2022
Himilo – Dadka qaar waxaa ku adag qaadashada labo moobil. Laakiin ninkan, wuxuu heystaa 1,000 telefoonada gacanta ah. Waxa yaabka leh ee qisadiisa ku jira waa inuu haddana maalin walba iibsado telefoon cusub oo hor leh. Ganacsade walba oo iibiya ...
Rakaab diyaaradeed oo argagaxay markii ay arkeen mas la saaran
Ahmed Haaddi February 14, 2022
Himilo – Diyaarad duulimaad gudaha ah ka sameysay Malaysia ayaa si deg deg ah u degtay kadib markii rakaabkii saarnaa diyaaradda ay arkeen mas kula dhex jira diyaaradda. AirAsia ayaa xaqiijisay in duulimaad oo ka yimid Kuala Lumpur kuna socday ...
Majaajiliste guri kula nool siddeed xaas
Ahmed Haaddi February 9, 2022
Himilo – Majaajiliste caan ah oo ku nool Thailand ayaa qabsaday baraha bulshada waddankiisa kaddib markii shaaca laga qaaday inuu hal guri nolol kula wadaago siddeed xaasas ah kuwaas oo dhamaantood ku qanacsan noloshiisa. Ong Dam Sorot wuxuu siddeediisa xaas ...
Sweden: Shirkad shaqaaleysiineysa Tuke-yaal
Ahmed Haaddi February 5, 2022
Himilo – Shirkad fashigeedu yahay dalka Sweden ayaa tuke-yaal u shaqaaleysiisay inay haraadiga sigaarka ka aruuriyaan waddooyinka magaalo xeebeedda Södertälje. Tuke-yaasha ayaa loo tababaray qaadidda qashinka, iyo geynta halka loogu tala-galay. Ujeedada laga leeyahay ayaa ah in la yareeyo qarashka ...
Thailand: Degmo qofka iska tallaala COVID-19 la siinayo sac
Ahmed Haaddi January 30, 2022
Himilo – Maamulka degmo ku taalla waqooyiga Thailand ayaa billaabay olole bakhtiyaa nasiib ah, kaas oo dadka laga tallaalo COVID-19 ay ku guuleysanayaan sac toddobaad kasta. Bulshada ku nool degmada Mae Chaem ee gobolka Chiang Mai ayaa nasiib u yeeshay ...
Ahmed Haaddi January 18, 2022
Himilo – Iskuul hoose oo ku yaalla gobolka Yunnan ee Shiinaha ayaa qaar ka mid ah ardaydiisa ku abaal mariyay 20 Ey. Hou Changliang oo bare ka ah iskuulka ayaa sheegay in Eyda uu ugu deeqay urur maxalli ah oo ...